Uvimba weendaba | Law & More B.V.
Iindaba ezibalulekileyo zomthetho, imithetho yangoku kunye neziganeko | Law and More
Ukukhuselwa kwabathengi kunye nemigaqo kunye neemeko ngokubanzi
Oosomashishini abathengisa iimveliso okanye ababonelela ngeenkonzo bahlala basebenzisa imigaqo kunye neemeko ngokubanzi ukulawula ubudlelwane kunye nomamkeli wemveliso okanye wenkonzo. Xa umamkeli engumthengi, uyakonwabela ukukhuselwa ngumthengi. Ukukhuselwa kwabathengi kwenzelwe ukukhusela abathengi 'ababuthathaka' ngokuchasene nosomashishini 'onamandla'. Ngendle […]
Abantu abaninzi batyikitya isivumelwano ngaphandle kokuqonda iziqulatho
Sayina ikhontrakthi ngaphandle kokuyiqonda imixholo yayo. Uphando lubonisa ukuba abantu abaninzi basayina ikhontrakthi ngaphandle kokuyiqonda imixholo yayo. Kwiimeko ezininzi oku kuchaphazela ukurenta okanye ukuthenga iikhontrakthi, iikhontrakthi zengqesho kunye nezivumelwano zokupheliswa. Isizathu sokungaziqondi iikhontrakthi zihlala sifumaneka kusetyenziso lolwimi; […]
Ngaba umThetho weZibonelelo zokugula zeDatshi emva kokukhubazeka emsebenzini ngenxa yezikhalazo zengqondo emva kokukhulelwa?
UMthetho weziBonelelo zokugula Ngokusekwe kwinqaku lama-29a loMthetho weziBonelelo zokugula owasetyhini o-inshurensi ongakwaziyo ukwenza umsebenzi unelungelo lokufumana intlawulo ukuba unobangela wokukhubazeka emsebenzini uhambelana nokukhulelwa okanye ukuzala. Kwixesha elidlulileyo, unxibelelwano phakathi kwengqondo […]
Oktobha 24, 2018
ENetherlands umntu ufumene incwadi yokundwendwela ngaphandle kwesini
Ngethuba lokuqala eNetherlands umntu ufumene ipasipoti ngaphandle kokuchazwa ngokwesini. UNks Zeegers akazive eyindoda kwaye engaziva ngathi ungumfazi. Kwasekuqaleni konyaka, inkundla yaseLimburg yathatha isigqibo sokuba isini asiwona umcimbi weempawu zesondo kodwa […]
Urhulumente ufuna ukwahlula-hlula ipenshoni xa kuziwa kuqhawulo mtshato
Urhulumente wase-Dutch ufuna ukwenza amalungiselelo wokuba amaqabane aqhawula umtshato ngokuzenzekelayo afumane ilungelo lokufumana isiqingatha sepenshini yomnye nomnye. Umphathiswa waseDatshi uWouter Koolmees weMicimbi yezeNtlalo kunye neNgqesho ufuna ukuxoxa ngesindululo kwiGumbi lesiBini phakathi ku-2019. Kwixesha elizayo […]
Umhambi ukhuselwe ngcono ngokuchithwa kwemali ngumnikezeli wokuhamba
Kubantu abaninzi kuya kubakho amaphupha amabi: iholide osebenze nzima kuyo unyaka wonke irhoxisiwe ngenxa yokugqalwa ngumboneleli wohambo. Ngethamsanqa, ithuba lokuba oku kwenzeke kuwe lincitshisiwe ngokuphunyezwa komthetho omtsha. Nge-1 kaJulayi 2018, entsha […]
Umahluko phakathi komlawuli kunye neprosesa
Ummiselo woKhuseleko lweDatha ngokuBanzi (GDPR) sele usebenze iinyanga ezininzi. Nangona kunjalo, kusekho ukungaqiniseki malunga nentsingiselo yamagama athile kwi-GDPR. Umzekelo, ayicacanga kuye wonke umntu ukuba yintoni umahluko phakathi kwesilawuli kunye neprosesa, ngelixa ezi zingundoqo […]
Oktobha 11, 2018
Ukuziphatha okungekho sesikweni ngokunyuka kweefowuni
Igunya laseDatshi laBathengi nabaThengisi Izenzo zorhwebo ezingalunganga ngokuthengisa ngomnxeba zixelwa rhoqo. Esi sisiphelo seGunya laseDatshi laBasebenzisi nabaThengi, isuphavayiza ezimeleyo emele abathengi kunye namashishini. Abantu batsalelwa ngakumbi nangakumbi ngomnxeba ngezinto ekuthiwa zizibonelelo ze […]
Oktobha 8, 2018
Ukulungiswa komThetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi waseDatshi
Umthetho woLawulo lwe-Ofisi yeDutch Trust ngokwe-Dutch Trust Office Supervision Act, le nkonzo ilandelayo ithathwa njengenkonzo ye-trust: ukubonelelwa ngendawo esemthethweni yeziko elisemthethweni okanye inkampani ngokudibeneyo kunye nokunikezelwa kweenkonzo ezongezelelweyo. Ezi nkonzo zongezelelweyo, phakathi kwezinye izinto, zinokubonelela ngokubonelela […]
Oktobha 4, 2018
Ilungelo lokushicilela: lufumaneka nini esidlangalaleni?
Umthetho wobunini bobunini bobugcisa uqhubeka ukhula kwaye ukhule ngokumangalisayo kutshanje. Oku kunokubonwa, phakathi kwezinye izinto, kumthetho welungelo lokushicilela. Kule mihla, phantse wonke umntu ukuFacebook, Twitter okanye kwi-Instagram okanye unewebhusayithi yakhe. Abantu ke ngoko benza umxholo ongaphezulu kunangaphambili, owawupapashwa esidlangalaleni. […]
Oktobha 2, 2018
'Umthumeli webhayisikile ye-Deliveroo uSytse Ferwanda (20) ngusomashishini ozimeleyo hayi umqeshwa' isigwebo senkundla eAmsterdam. Isivumelwano esigqitywe phakathi komhlanguli kunye neDeliveroo asibalwa njengekhontrakthi yengqesho - kwaye ke umhlanguli akangomqeshwa […]
IPoland iye yanqunyanyiswa njengelungu le-European Network of C Council for Judicial (ENCJ)
Inethiwekhi yaseYurophu yamaBhunga eeNkundla I-European Network of Councils for Judiciary (ENCJ) iyimisile iPoland njengelungu. I-ENCJ ithi iyathandabuza ngokuzimela kwegunya lezomthetho lasePoland ngokusekwe kuhlaziyo lwamva nje. Umbutho olawulayo wasePoland Umthetho kunye nezoBulungisa (PiS) une […]
Ukuthumela iindleko ezingalunganga kunye nezobuxoki kuGoogle
Ukuthumela uhlolo olubi nolungeyonyani lukaGoogle kuxabisa umthengi ongonelisekanga kakhulu. Umthengi uthumele uphononongo olubi malunga nenkulisa kunye neBhodi yaBalawuli phantsi kweendawo ezahlukeneyo nokungaziwa. Inkundla yezibheno yaseAmsterdam yathi umthengi akaphikisani nokuba akakhange enze ngokungqinelana ne […]
Ngaba uceba ukuthengisa inkampani yakho?
Inkundla yezibheno eAmsterdam Emva koko kububulumko ukucela ingcebiso efanelekileyo malunga nemisebenzi enxulumene nebhunga lemisebenzi lenkampani yakho. Ngokwenza njalo, unokuthintela isithintelo kwinkqubo yokuthengisa. Kumgwebo osandula ukwenziwa weNkundla yezibheno eAmsterdam, iCandelo lamaShishini […]
Ukulungiswa komgaqo-siseko wase-Datshi: Unxibelelwano oluyimfihlo lonxibelelwano lukhuselekile ngcono kwikamva
Nge-12 kaJulayi ka-2017, iNdlu yeeNgwevu yase-Dutch ngamxhelo-mnye yavuma isindululo sika-Mphathiswa Wezangaphakathi kunye ne-Kingdom Relations Plasterk, kwixa elizayo, ukukhusela okungcono ubumfihlo be-imeyile kunye nolunye unxibelelwano olunononophelo lwabucala. Inqaku le-13 umhlathi 2 woMgaqo-siseko waseDatshi uxela ukuba imfihlo yeminxeba […]
Imigaqo emitsha yentengiso yecuba e-elektroniki ngaphandle kwe-nicotine
Ukusukela nge-1 kaJulayi 2017, akuvumelekanga eNetherlands ukubhengeza iisigarethi zecomputer ngaphandle kwenicotine kunye nokuxutywa kwemifuno kwemibhobho yamanzi. Imigaqo emitsha isebenza kuye wonke umntu. Ngale ndlela, uRhulumente waseDatshi uqhubeka nomgaqo-nkqubo wakhe wokukhusela abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ukusukela nge-1 kaJulayi 2017, […]
I-Rotterdam harbor kunye ne-TNT yexhoba lokuhlaselwa kweHacker yehlabathi
NgoJuni 27, 2017, iinkampani zamanye amazwe zazine-IT engasebenziyo ngenxa yohlaselo lwe -hlengo. ENetherlands, i-APM (eyona nkampani inkulu yokuhanjiswa kweekhonteyina eRotterdam), i-TNT kunye nabenzi bamayeza i-MSD bachaza ukusilela kwenkqubo yabo ye-IT ngenxa yentsholongwane ebizwa ngokuba yi “Petya”. Intsholongwane yekhompyuter iqale eUkraine apho ichaphazele khona […]
UGoogle uhlawulise irekhodi le-2,42 ye-EU yezigidigidi yi-EU. Esi sisiqalo nje, kunokuwiswa ezinye izohlwayo ezibini
Ngokwesigqibo seKhomishini yaseYurophu, uGoogle kufuneka ahlawule isohlwayo se-EUR 2,42 yezigidigidi ngokwaphula umthetho we-antitrust. IKhomishini yaseYurophu ithi uGoogle usebenzise imveliso yakhe yokuthenga kuGoogle kwiziphumo zenjini yokukhangela kuGoogle ukwenzakalisa abanye ababoneleli bempahla. Amakhonkco […]
IKhomishini yaseYurophu ifuna abalamli babazise malunga nolwakhiwo…
IKhomishini yaseYurophu ifuna abalamli ukuba babazise malunga nolwakhiwo lokuthintela ukuhlawula irhafu ababenzela abathengi babo. Amazwe ahlala ephulukana nengeniso yerhafu ngenxa yolwakhiwo lwemali oluninzi olwenziwa ngabacebisi ngerhafu, abagcini zincwadi, iibhanki kunye namagqwetha (abalamli) abenzela abathengi babo. Ukwandisa ukwenza izinto elubala nokwenza ukuba ukurhafiswa kweerhafu […]
Wonke umntu kufuneka agcine i-Netherlands ikhuselekile ngokombhalo uthi ICybersecuritybeeld Nederland 2017
Wonke umntu ufuna ukugcina iNetherlands ngokwamanani ikhuselekile ithi Cybersecuritybeeld Nederland 2017. Kunzima kakhulu ukuthelekelela ubomi bethu ngaphandle kwe-Intanethi. Kwenza ubomi bethu bube lula, kodwa kwelinye icala, kuthwala umngcipheko omninzi. Itekhnoloji ikhula ngokukhawuleza kwaye inqanaba lolwaphulo-mthetho kwi-intanethi liyakhula. ICybersecuritybeeld Dijkhoff (USekela […]
INetherlands yinkokeli yokuphuhlisa izinto ezintsha eYurophu
Ngokwe-European Innovation Scoreboard yeKhomishini yaseYurophu, iNetherlands ifumana izikhombisi ezingama-27 zokwenza izinto ezintsha. INetherlands ngoku ikwindawo yesi-4 (2016 ukuya kwindawo yesi-5), kwaye ibizwa njengeNkokeli ye-Innovation kwi-2017, kunye neDenmark, iFinland ne-United Kingdom. NgokukaMphathiswa waseDatshi […]
Iirhafu: ezidlulileyo nezangoku
Imbali yerhafu iqala ngexesha lamaRoma. Abantu ababehlala kummandla woBukhosi baseRoma kwakufuneka bahlawule irhafu. Imithetho yokuqala yerhafu eNetherlands ivela ngo-1805. Umgaqo osisiseko werhafu wazalwa: umvuzo. Irhafu yengeniso yamiselwa ngokusesikweni ngo-1904. IVAT, irhafu yengeniso, irhafu yomvuzo, […]
Ngaba ungumDatshi kwaye unqwenela ukutshata kwelinye ilizwe?
Umntu ongumDatshi AmaDatshi amaninzi kusenokwenzeka ukuba aphupha ngayo: ukutshata kwindawo entle phesheya, mhlawumbi nakwindawo yakho oyithandayo, yeholide yonyaka eGrisi okanye eSpain. Nangona kunjalo, xa wena - njengomntu ongumDatshi- unqwenela ukutshata kwelinye ilizwe, kufuneka uhlangabezane nezinto ezininzi ezenziwayo kunye neemfuno […]
NgoJulayi 1, 2017, eNetherlands umthetho wezabasebenzi uyatshintsha…
NgoJulayi 1, 2017, eNetherlands umthetho wezabasebenzi uyatshintsha. Kwaye kunye neemeko zempilo, ukhuseleko kunye nokuthintela. Iimeko zokusebenza zenza into ebalulekileyo kubudlelwane bengqesho. Abaqeshi kunye nabasebenzi banokuxhamla kwizivumelwano ezicacileyo. Okwangoku kukho iyantlukwano enkulu yezivumelwano […]
Ngamana 30, 2017
Olona tshintsho luphantsi lwemivuzo kwiNederlands ukusuka nge-1 kaJulayi, 2017
Ubudala bomqeshwa eNetherlands owona mvuzo mncinci uxhomekeke kubudala bomqeshwa. Imithetho esemthethweni kumvuzo omncinci unokuhluka ngonyaka. Umzekelo, ukusukela nge-1 kaJulayi, 2017 owona mvuzo usezantsi ngoku ufikelela kwi-1.565,40 ngenyanga ngenyanga yabasebenzi abaneminyaka engama-22 nangaphezulu. 2017-05-30
Ngamana 22, 2017
Iinkqubo zezomthetho zenzelwe ukufumana isisombululo kwingxaki…
Iingxaki zomthetho Iinkqubo zomthetho zenzelwe ukufumana isisombululo kwingxaki, kodwa zihlala ziphumelela ngokuchaseneyo. Ngokophando olwenziwe kwiziko lophando lwesiDatshi i-HiiL, iingxaki zomthetho zisonjululwa kancinci nangaphantsi, njengoko imodeli yenkqubo yesiko (ebizwa ngokuba yimodeli yetonamenti) endaweni yoko ibangela ukwahlukana phakathi […]
Ngamana 19, 2017
Kule mihla, i-hashtag ayithandwa kuphela ku-Twitter naku-Instagram…
#bonga kule mihla, i-hashtag ayithandwa kuphela kwi-Twitter nakwi-Instagram: i-hashtag isetyenziselwa ukuseka uphawu lwentengiso. Kwi-2016, inani leempawu zorhwebo ezine-hashtag phambi kwalo lonyuke nge-64% kwihlabathi liphela. Umzekelo olungileyo woku luphawu lwentengiso ye-T-mobile '#getthanked'. Okwangoku, ibango […]
Iindleko zokusebenzisa ifowuni yakho esiphathwayo phesheya ziyancipha ngokukhawuleza
Kule mihla, sele kunqabile kakhulu ukubuyela ekhaya kwi-bill (engacaciswanga) ephezulu yefowuni yamakhulu ambalwa eerandi emva kohambo lonyaka, olufanelekileyo ngaphakathi kweYurophu. Iindleko zokusebenzisa iselfowuni phesheya ziye zehla ngaphezulu kwe-90% xa kuthelekiswa ne-5 edlulileyo ukuya […]
Ukuba bekuxhomekeke kuMphathiswa waseDatshi…
Ukuba bekuya kuMphathiswa wase-Dutch Asscher wezeNtlalontle kunye neNtlalontle, nabani na ofumana umvuzo omncinci osemthethweni uyakufumana isixa esilinganayo seyure kwixesha elizayo. Okwangoku, umvuzo omncinci weyure waseDutch usenokuxhomekeka kwinani leeyure ezisetyenzisiweyo kunye necandelo […]
Ngaba ukhe wabhukisha iholide yakho kwi-intanethi? Ke amathuba aphezulu ukuba…
Ngaba ukhe wabhukisha iholide yakho kwi-intanethi? Ke amathuba aphezulu ukuba ukhe wadibana nezibonelelo eziza nomtsalane ngakumbi kunokuba zinjalo ekugqibeleni, ngenxa yokudakumba okuninzi njengesiphumo. Ukuhlolwa kweKhomishini yaseYurophu kunye nabasemagunyeni abakhusela abathengi [EU]
Kumthetho osayilwayo omtsha waseDatshi obekwe kwi-intanethi ukuze kuboniswane nawo namhlanje…
Umthetho osayilwayo waseDatshi Kumthetho osayilwayo omtsha wase-Dutch obekwe kwi-intanethi ukuze kuboniswane nawo namhlanje, umphathiswa wase-Dutch uBlok (uKhuseleko noBulungisa) uvakalise umnqweno wokuphelisa ukungaziwa kwabantu abanezabelo. Kungekudala kuyakwenzeka ukuba babone aba banini zabelo ngesiseko […]
Kule mihla, akunakwenzeka ukuba nomfanekiso-ngqondweni wehlabathi elingenazo iidrones…
I-Drones Kule mihla, phantse akunakwenzeka ukuba nomfanekiso wehlabathi ngaphandle kweedrones. Ngenxa yolu phuculo, iNetherlands, umzekelo, sele inokonwaba kwimifanekiso eqingqiweyo yedrama eyonakeleyo 'iTropicana' kwaye unyulo luye lwabanjwa ukuze luthathe isigqibo ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo. Njengoko iidrones zinga […]